ठेलामा मःम बेच्ने २५ वर्षे नवराजको सफलता
Homeसमाचारठेलामा मःम बेच्ने २५ वर्षे नवराजको सफलता
February 2, 2021 admin समाचार 4692
केही वर्षअ’घि पशुपति शर्माको ‘मलाई अमेरिका यहि मलाई जापान पनि यही’ गीतले खुबै प्रशं’सा पायो । धेरैका लागि यो गीत रमाइलोका लागि मात्र बन्यो तर केहीका लागि यो गीत गुरु बन्यो । गीतमा बोलिएका प्रत्येक शब्द प्रेरक जीवन उप’योगी सीप बने ।
स्वदे’शमै केही गरौं भन्ने सो’चका साथ साना र लघु उद्यम गर्दै आएका युवाका लागि भने पशुपतिको गीत एक उर्जा बन्यो । यसरी देशमै पसिना बगाएर स’फल बन्ने उद्देश्यका साथ मेहनत गरि’रहेका युवा हुन्- गुल्मीका २५ वर्षे नवराज भण्डारी ।
उनको मेहनत परि’श्रमले उनलाई हङकङ, बेलायत, सिंगापुर अमेरिका नै चाव’हिलको स्तुपा बनेको छ । उनलाई मात्र होइन उनको ठेलामा मःम खाना आउनेहरुले पनि कुनै ‘रेष्टुरेन्ट’ भन्दा कम महशुस गर्दैनन् । परिश्रम र मेहनत गर्नेहरु स्वदेशमै रमाउँछन् । विदे’शमा गएर मात्र पैसा कमाउन सकि’न्छ भन्ने सोच हुनेहरुका लागि नवराज एक उदाहण पनि बन्न सक्छन् ।
नवराजको स्थायी घर गुल्मी जिल्ला मुसीकोट नगरपालिका वडा नम्बर १ हो । सानै छँदा उनका बुबाको मृ’त्यु भयो । उनी परिवारका कान्छा छोरा । गाउँमै जन्मिएका उनी बिहानबेलुका खेती’पातीमा काम गर्थे साथै दिउँसो विद्यालय जान्थेँ । पढाई पनि राम्रै थियो उनको ।
नवराज एसएलसी पास गर्नसाथ उच्च शिक्षाको खोजीमा ०६८ सालमा काठमाडौं प्रवेश गरे । शुरुमा तिन’कुनेमा डेरा लिएर दाजुसँग बसे । ‘गाउँबाट एसएलसी पास भएर क्याम्पस पढ्न आएँ, क्याम्पस भर्ना पनि भएँ’उनले काठमाडौंका शुरुका दिन दिन सुनाउँदै हसिँलो चेहे’रासहित मुस्कुराउँथे । अनि केहि मलिन अनुहार लगाएर भने, ‘पढ्ने भनेर आएको अचा’नक कलेज जान मनै लागेन ।’
एक्का’सी उनको धनी बन्ने उनको रहरका कारण कलेज जाने रहर टुटेको रहेछ । ‘मलाई पनि विदेश जाने रहर लाग्यो । बेलैमा धेरै धन कमाउन विदेश नै उप’युक्त हो भन्ने लागेको थियो,’ नवराजले भने, ‘विदेश जाने रहरले नै क्याम्पस छोडेँ । म कतार पनि गएँ । त्यहाँ पुगेपछि नेपालमै केही गर्नुपर्छ भन्ने भा’वना पलायो । अहिले यहाँ जसोतसो गरिरहेको छु ।’
५ वर्षअघि उनी पैसा कमा’उन कतार पुगेका रहेछन् । थोरै लगानीमा ६ महिनाका कतार बस्ता आम्दा’नी राम्रै भएको उनले सुनाए । तर कतारमा काम गर्दै-गर्दै उनलाई नेपालमा गएर केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच आउन थाल्यो । ‘कतारमा महिनाको ५० हजारसम्म कमाउथेँ, तर विदेशमा काम गर्नुभन्दा स्वदे’शमै केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचेर पैसा बचत गर्न थालेँ’नवराजले भने । त्यही सोचलाई साकार पार्न उनी आफूले कमाएको पैसा लिएर ६ महिनापछि नेपाल फ’र्किए । आफ्नै जन्मभूमिमा फर्किंदा अब जे गर्छु, स्वदे’शमै गर्छु भन्ने सोच आएको थियो उनलाई ।
काठमाडौं आएसँगै चावहिल स्तुपा छेउमा डेरा लिए । श्रीमती र एक छोरासँगै रमा’उँदै बस्न थाले । दुःखसुख जेभएपनि परिवारसँग बस्न पाउँदा छुट्टै आनन्द हुने नव’राजले सुनाए । भन्छन्, ‘पैसा मात्र ठुलो कुरा होइन रै’छ, परिवारको साथमा बस्न पाउनु नै खुसीको कुरा हो ।’काठमा’डौंको ठाउँ । महंगी उस्तै । जागिर बिना कसरी बस्न सकिन्थ्यो र ? ‘पाइलैपिच्छे पैसा लाग्थ्यो’ उनले थपेँ । फेरि कतारबाट आउँदा ल्याएको पैसा पनि बि’स्तारै खर्च हुदै जान थाल्यो ।
के गर्ने ? कसरी पैसा क’माउने ? व्यापार व्यवसाय गर्न नि प्रशस्त लगानी लाग्छ ! उनी मनमनै सोच्थे । पहिल्यै कुक सिकेकाले उनलाई होट’लप्रतिको मोह थियो । त्यसलाई प्रयोग गर्ने सोचले उनले ठेला बनाउन दिने र त्यसमा मःम बनाएर बेच्ने कल्पना गरे ।
ठेलामा मःमको व्या’पार नवराजले करिब ४ वर्षअघि ५० हजार लगानीमा ठेला मःम राख्न शुरु गरे । ‘कसैलाई चिनेको थिइनँ, नयाँ व्यवसाय शुरु गर्दै थिए, व्यापार होला कि नहोला भन्ने चिन्ताले पिरोल्थ्यो’ उनले विगतलाई सम्झ’दैँ भने ।
तर मेहनती नवराजको परि’श्रमलाई सबैले मन पराउन थाले । एका-एक व्यव’साय राम्रो बन्दै गयो । मानिसहरु दैनिक जसो उनको ठेलामा मःम खान आउन थाले । सुरुवाती दिनमा नै राम्रो व्यापार हुन थाल्यो । दिनभरी स्तुपाको फु’टपाथमा मःम बेच्न बस्ने गरेको बताउँदै नवराज भन्छन्, ‘मासिक एक-डेढलाख सम्म क’माउने गर्थे’।
तर केही सम’यपछि महानगरले फुटपाथमा बेच्न नदिने नियम ल्यायो । नियम उल्लङघन गर्नेलाई कारवाही र जरि’वाना पनि हुन्छ भन्यो त्यसपछि व्यापार अलि सुस्ताएको अनुभव उनले सुनाए । महानगरले रोक्दै’मा उनको कमाइ खाने भाडो कहा सुक्थ्यो र ? भन्छन्, ‘जाँगर हुनुपर्‍यो, काम गर्नका लागि जति पनि अवसर छन्’ । अब झन अर्को विक’ल्प पनि रोज्न थाले उनी ।
बिहानको समय अर्कै व्य’वसाय सुरु गर्ने सोचे । उनको सोचसँगै अर्को व्यवसाय पनि सुरु भयो ‘ठेलामा जुत्ता चप्पल बेच्ने’। ‘बिहान जुत्ता चप्पल बेच्ने र बेलुकी मःम बेच्ने सोच बनाएँ, यी सबै काममा जीवन साथीको सहयो’गले अघि बढ्दै गएँ’नवराजले खुसी हुदै भने ।
जुत्ता’चप्पल र मःमसँग गाँसिएको दैनिकी
उनी बिहान सवेरै उठछन् । ठेलामा जुत्ता चप्पल मिलाएर राख्छन् र ७ बजेतिर डेरा’बाट निस्कछन् । ठेला धकेल्दै चावहिल, चुच्चेपाटी, बौद्ध, कुमारीगल, गौरीघाट, मित्रपार्कसम्म पुग्छन् । उनले ठेलामा एक सय देखि ४ सय रुपैँया’सम्मका जुत्ता चप्पल बेच्न राखेका छन् ।
ठेला गुडाउँदै घुम्ने क्रममा उनी १२ बजे चावहिल आइपुग्छन् । थकान महशुस गर्दै डे’रातिर पस्छन् । खाना खान्छन् र हत्तारहत्तार गर्दै मःम र ससेजका लागि सामग्री तयार पार्दै ठेला स्तुपा अगााडी लैजान्छन् । दिउँसोको ३ बजेदेखि बेलुकी ८ बजेसम्म उनको ठेला वरि’परी मःम खानेहरुको लाइन बन्छ ।
कुराकानीका क्रममा मुसु’क्क हास्दैँ उनी भन्छन्, ‘लामो समय भएकाले पूरानै ग्राहक बढि आउँछन्, नयाँ ग्राहकहरुले पनि मिठो मान्छन्, थपी थपी खान्छन् ।’ ‘व्यापार पनि राम्रै छ मासिक ७० हजा’रसम्म आम्दानी हुन्छ’उनले भने ।
ग्राहकसँग मीठो बोली बोल्ने बानी र गर्ने व्यव’हारले पनि होला उनको ठेलामा मःम खानेको भीड सधै उस्तै देखिन्छ । उनी भ्याइनभ्याइ काम गरिरहन्छन् । ‘दैनिक ८० प्लेटसम्म मःम बेच्छु, ४ केजीसम्म ससेज बेच्छु’उनले भने ।
मःमबाट राम्रै कमा_इरहेका उनले जुत्ता चप्पलबाट पनि चित्त बुझ्दो आम्दानी भएको सुनाउँछन् । ‘कहिले एकै दिन ४/५ हजारको व्यापार हुन्छ, कहिले ५ सयको मात्रा हुन्छ’उनले भने । साथै निरन्तर खट्न सकेमा राम्रै व्या’पार हुने उनको भनाई छ । कामप्रति उनको लगावले पैसा कमाउन मेहनत र ला’गाव चाहिन्छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
‘पैसा कमा’उनका लागि संघर्ष त चाहिन्छ नै तर बढि परिश्रम चाहिँदैन । दिमाग लगाउन सकेमा आनन्दले पैसा कमाउन सकिन्छ’उनी भन्छन् । नेपालमा जागिर नै छैन भन्दै युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्छन् तर सोच्ने हो भने जताततै रो’जगारका स्रोत छन् । थोरै र साना व्यवसायबाटै कामको थालनी गर्नुपर्छ । अन्तमा उनले भने, ‘पैसा कमाउन विदेश नै जानुपर्छ भन्ने छैन स्वदेशमै पनि पैसा फलाउन सकिन्छ । तर, सकारात्मक र सिर्ज’नात्मक सोच चाहिन्छ ।’ – खबरहबबाट
October 29, 2020 admin समाचार 7168
लामो समय’पछि महानायक राजेश ह’मालले एउटा म्यूजिक भिडि’योमा अभिनय गरेका छन् । महा’नायक हमालले ‘स’म्झिएर जिन्दगी’ बोलको गीत रहको म्यूजिक भि’डियोमा अ’भिनय गरेका हुन् । उनीसंगै उनकी प्रेमी’काको रुपमा अ’भिनय गरेकी छन् नायि’का पुष्पा लिम्बुले
July 11, 2021 admin समाचार 4878
April 30, 2021 admin समाचार 3268
थर्ममिटरबाट तापक्रम नापिरह’नुहोला । ९८ – ९९ फरेनहा’इटसम्म व्यक्ति अनुसार नर्मल तापक्रम हो । १०० पुग्यो भने पारासिटामोल खानुहोला । शरीर दुखेमा / टाउको दुखेमा पनि पारासि’टामोल खान सकिन्छ । पल्स अक्सि’मिटरबाट अक्सिजनको स्तर नापिरहनुहोला
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (208633)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (174944)